Askari lagu helay fududaynta Dilkii Paul Farmosa oo lagu xukumay Bosaso (dhegayso) – Radio Daljir
Askari lagu helay fududaynta Dilkii Paul Farmosa oo lagu xukumay Bosaso (dhegayso)
Luulyo 29, 2019 2:04 g 0
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukuno kalle duwan ku riday sagaal iyo toban qof oo ku eedaysnaa dambiyo kalle duwan.
Xukunka ayaa dadka lagu riday waxaa ka mid ah askari ka mid ahaa ciidmaada PMPF ee Puntland Axmed Maxamed Maxamud (Sheekeeye) oo lagu helay inuu fududeeyay dilkii Paul Anthony Farmosa oo ahaa maamulihii dekedda Bosaso iyo qof dumar ah.
Waxa Laxakumay 19 qof oo ay kujiraan 6 Qof oo midi dumar tahay midna PMPF oo loo haysto Dilkii Paul.
Guddoomiyaha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka waxaana uu udhacay sidaan
6 Alshabaab ah iyo 1 Daacish ah Dil.
7 Alshabaab ah lagu xakumay iyagoo maqan Dil toogasho ah.
2 Alshabaab ah nin iyo Naag Xabsi Daaim
2 Alshabaab ah lagu xakumay mid 20 Sano.
Hal nin oo la siidaayay, sida uu ku dhawaaqay Cawil Jaajaalle guddoomiyaha maxkamadda ciidamada.
Barlamaanka DFS oo Puntland kala qayb galaya Munaasabadda 1-Ogoosto (Daawo)
Wasiirka Amniga Puntland oo faray shacabka inay amniga ka shaqeyaan (Daawo)